म संग जापान जानको लागि केटा चाहियो ! ईच्छुकले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला ! — newsparda.com
विज्ञापन:-म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापनजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो । मेरो लगभग उमेर पनि पुगी सकेको छ ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️
साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेरो मनमा एउटा विचार आयो । उत विचार मैले मेरो घरमा बा आमालाइ पनि भने, र बा आमाबाट पनि त्यो कुरा लाई स्विकार गर्नुभयो । मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएको २२ बर्ष नाघेको केटा पनि खोजे तर भने जस्तो पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर आए ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडौको बसुन्धारामा नहि बसि रहेको छु । त्यस कारणा मलाइ छिटो भन्दा छिटो वाहिर जानु परने भएको हुदा सोहिवमोजिमको मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु । त्यस कारणा आज मैले राम्रो असल केटाको खोजिले गर्दा यो फेसबुक मार्फत सबैले जान कारी गराएको छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ । भन्ने विश्वासलागेको छ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇 https://samacharpostdainik.com/ बाट साभार गरिएको ।